Ngokubanzi - Iindaba Zokuhamba | Iindaba Zohambo (Iphepha 2)
Zazakhiwe njani iiphiramidi zaseYiputa?
Iiphiramidi zaseYiputa zezinye zeemfihlelo ezinkulu zehlabathi. Ziyinto engakholelekiyo, ngakumbi xa uphulaphule iithiyori eziye zalukwa kwaye ziqhubeka Iiphiramidi zaseYiputa ziyamangalisa kwaye ziyimfihlakalo ngexesha elifanayo. Ngaba uyakholelwa oko abembi bezinto zakudala bathi malunga nokwakhiwa kwayo okanye ucinga ukuba kukho ikati evalelweyo?
iinqaba ezinde ehlabathini
Eyona nqaba inde ehlabathini ifumaneka ikakhulu eAsia. Owokuqala ovela eNtshona ukwindawo yesibhozo. Yiba nobuganga bokuzifumana.
Zininzi ii-bunkers eSpain ukusuka eBilbao ukuya eCatalonia, udlula eMadrid. Awucingi ukubandwendwela lolunye ukhenketho?
Zasekwa njani iiCanary Islands?
IZiqithi zaseCanary lichwebakazi elikuLwandlekazi lweAtlantiki. Zikumntla-ntshona weAfrika yaye xa zizonke zidibanisa iziqithi ezisibhozo, iziqithi ezihlanu nezisibhozo. Fumana into eyaziwayo malunga nokwakhiwa kwayo ngexesha, i-magma kunye nokuqhuma kwe-pyroplastic.
Ukutya okuqhelekileyo kweSeville
I-gastronomy yaseSpain inencasa kakhulu kwaye iyahluka, ngoko ke nokuba uyaphi uya kudla ngokumangalisayo. Ukuba, umzekelo, uhambahamba ujikeleza ukuba uya eSeville, ungalibali ukuzama ezona zidlo ziqhelekileyo zegastronomy yayo emnandi neyohlukeneyo: iintlanzi, iinkumba, iimbotyi, iisoseji nokunye okuninzi.
Uninzi lweetshizi zaseFransi ezidumileyo
IFransi ifana neetshizi. Ummandla ngamnye welizwe unesonka samasi okanye iitshizi ezithile, kwaye kukho malunga nama-240 etshizi ezifumaneka ngokubanzi Fumanisa iindidi ezimnandi nezinencasa zeetshizi zaseFransi ezidumileyo: iRoquefort, iBrie, iReblochon nezinye ezininzi...
Amabali eAlhambra. Fumana iintsomi ezihamba nesikhumbuzo esihle saseGranada, esibhengezwe njengeNdawo yeLifa leHlabathi.
Amasiko ommandla weAmazon
Izithethe zommandla weAmazon ziquka iinkolelo zonqulo nendlela yokuphila yezizwe ezikuwo. Zifumanise.
Izithethe ezinqabileyo emhlabeni
Kwaye xa ucinga ukuba ihlabathi liyindawo eqhelekileyo kunamanye amaxesha, uyaqonda ukuba akunjalo, ukuba kusekho izithethe, amasiko, izinto ezininzi Ukophula izitya, ukunqumla iminwe, ukuphosa iitumato, iiorenji okanye isinamon, ukufihla iintloko zehashe. , iintsana ezitsibayo... uyawazi la masiko angaqhelekanga?
Ukutya okuqhelekileyo kwaseSpain
Ukutya okuqhelekileyo kweSpanish okufana ne-omelet yeitapile, i-paella okanye isityu sebhontshisi yase-Asturian zidume kwihlabathi liphela. Yiba nesibindi sokuzingcamla.
Naturism: yintoni na
Sonke siye sagoduka ze ngaxa lithile okanye sakhulula isuti yethu yokuhlamba echibini, kwaye sikhumbula ukuba imvakalelo engaqhelekanga neyolisayo yeNaturism ingaphezulu kokuhamba ze elunxwemeni, yindlela yokuphila enokuthi nabani na ayilandele.
Izithethe zaseSwitzerland zisukela kubomi boluntu ukuya kubuchwephesha ngokusebenzisa imibhiyozo kunye ne-gastronomy. Yiba nobuganga bokuzifumana
Izitya zesiJamani eziqhelekileyo
IJamani lilizwe lomdibaniso elineenkulungwane ezininzi zembali, ngoko ke ukutya kwayo kutyhila olu hambo lwenkcubeko. Ayidumanga njengeFrentshi, i-cuisine yaseJamani ingaphezulu kwesoseji kunye nebhiya, ke zilungiselele ukuzama iincasa ezininzi kwaye ewe, kunye nebhiya eninzi.
Amasiko aseNgilani afana noSuku lweBoxing okanye ukutshintshwa komlindi eBuckingham kuya kukumangalisa. Unesibindi sokuhamba apho kwaye ujabulele
Izitya eziqhelekileyo zaseJapan
Ndiyakuthanda ukutya kwaseJapan, yinto endiyonwabela kakhulu ngalo lonke ixesha ndihamba kwaye, okwethutyana ngoku, kwisixeko sam. Kwaye kukuba ngokubaleka uyazazi ezona zitya ziqhelekileyo zaseJapan: sushi, ramen, soba, okonomiyaki, shabu-shabu, oinigiri ...
ISenegal lilizwe elikwiNtshona Afrika kwaye yaziwa ngokuba "yisango lokungena kwilizwekazi laseAfrika". Lilizwe elihle, elinemimandla eyahlukeneyo kwaye Yazi amasiko kunye nezithethe zaseSenegal.
IGrisi yenye yezona ndawo zidumileyo kwihlabathi. Emva kwayo yonke loo nto, sisiqalo sedemokhrasi yethu yanamhlanje kwaye usafumana amasiko aseGrisi: ukutya, ukuba zinjani iintsapho, umsebenzi, ubugcisa ...
Apho uya khona kwi-honeymoon
Ihoneymoon ibaluleke kakhulu kuba lixesha apho isibini siphumle kakhulu kwaye ekugqibeleni sinokonwaba kancinci. Ngaba yiMelika, iAsia, iAfrika okanye iYurophu ... ungathanda ukuya phi kwihoneymoon?
Fumanisa amasiko ase-Italiya, lawo abumbe isimilo sabemi bawo ngokuhamba kwexesha.
IJamani ikumbindi weYurophu kwaye emva kweRussia lilizwe elinabemi abaninzi kwilizwekazi, elinabantu abazizigidi ezingama-83.Fumanisa ukuba injani na inkcubeko yaseJamani, banjani abantu, amasiko abo, amasiko abo
I-Egypt lilizwe lamaSilamsi, ke kuyanceda ukwazi izinto ezimbalwa malunga nenkcubeko ngaphambi kokuba uhambe. Unxiba njani, ubulisa njani, indlela yokuziphatha.
IRoma sesinye sezona zixeko zibalaseleyo eYurophu. Ndiyathandana nesi sixeko, asinakuba sihle ngakumbi, sinenkcubeko ngakumbi, sinomdla ngakumbi ... Akunakwenzeka ngaphambi kokuya eRoma, funda kancinci malunga nenkcubeko yayo, imbali yayo, ukutya kwayo, imithendeleko kunye nezithethe zayo.
Funda ngembali yesinxibo sommandla waseGalician, impahla yesiko yabalimi benkulungwane yeshumi elinesixhenxe kwaye iyaqhubeka nanamhlanje.
Fumanisa ukutya okuqhelekileyo kweAguascalientes, ukudityaniswa kwesiko lokupheka kwezinye iindawo zaseMexico kunye ne-gastronomy yemveli.
I-China lilizwe elihle elineminyaka eliwaka, isityebi kunye neenkcubeko ezahlukeneyo. Kufana nehlabathi elihlukeneyo, kunye neelwimi zalo, imikhosi yalo, i-zodiac yayo, inkcubeko yayo yaseTshayina ityebile, yahlukile, inomdla, iyonwabisa. Amasiko abo, imithendeleko, ukutya, umculo ... kwanezodiac!
Sifunda "Ingingqi yeAndes" kwaye sicinga ngoMzantsi Melika nakumazwe aliqela, kodwa enyanisweni, ibhekisa komnye wemimandla emithandathu yendalo. Ingingqi yeAndes yenye yezona ndawo zinemihlaba eyahlukeneyo kunye neenkcubeko eColombia. . Fumanisa iimpahla zabo eziqhelekileyo!
Izambatho eziqhelekileyo zitolika amasiko, izithethe, yonke into ehambelana nomhlaba kunye nabantu bayo, inkcubeko, inkolo, i-gastronomy, kunye neengubo eziqhelekileyo ze-Oaxaca ziyingoma yombala kunye novuyo. Sukuyeka ukubazi.
IMexico lilizwe elinenkcubeko kunye nezithethe ezindala. Enye yezona ndawo zintle kakhulu yiChiapas, kumazantsi mpuma esizwe. Inesiqingatha sayo Ukuba kukho isinxibo esimibalabala nesonwabisayo esisinxibo esiqhelekileyo seChiapas, i "chiapaneca". Kodwa ayinguye yedwa!
Isinxibo esiqhelekileyo saseNicaragua
Isinxibo esiqhelekileyo selizwe ngalinye okanye ingingqi nganye ngaphakathi elizweni sisixelela malunga nommandla, amasiko nezithethe zawo. Kwaye xa umntu ethetha malunga nesinxibo esiqhelekileyo saseNicaragua sinxulunyaniswa nemidaniso yabo yesiko, ke lungela umhlaba onemibala eqaqambileyo kunye novuyo.
Isinxibo esiqhelekileyo saseVenezuela
Ilizwe ngalinye okanye ingingqi nganye ngaphakathi kwilizwe linempahla yesinxibo esiqhelekileyo, isinxibo sendabuko esidibanisa intsomi, oko kukuthi, intetho yenkcubeko.
Ilizwe ngalinye linamasiko alo, imveliso yokuhamba kwexesha, abantu balo, umhlaba walo. Zithini ke izithethe zaseSpain ezifanelekileyo? I-Flamenco, ukulwa kweenkunzi, amaqela, i-siesta, injani imitshato, yintoni eya kwimivalo kunye ne-tapas ...
Ukhuphiswano lwamahashe eSanúlcar
Imidyarho yamahashe eSanlúcar ngumboniso owahlukileyo owenzeka kwindalo entle nelungeleleneyo
Imibhiyozo esixhenxe yeAgasti eSpain ongayiphosiyo
Siphakamisa imithendeleko esixhenxe ka-Agasti eSpain ongayiphosiyo. Phakathi kwabo, ukuhla kweSella, iLa Paloma okanye iMalaga Fair
IMexico lilizwe elinenkcubeko eyahlukileyo eMelika, ke ngoko inolwandle lwezithethe ezinomdla nezinomdla. Abanye badala kakhulu, abanye nguMhla wabaFileyo, iNtombi yaseGuadalupe, iVeracruz Carnival, i-mariachis, i-posada ... bazi zonke izithethe zaseMexico!
Yayiyintoni impahla yama Mayan
AmaMeya abengomnye wabantu ababalulekileyo nabanomdla kwihlabathi lamandulo. Kusasazwa kulo lonke elakuMbindi Merika, amawaka eminyaka.Uke wazibuza ukuba amaMaya amandulo ayenxiba njani? Babenxibe iziketi, iimbadada, iihempe, iihempe ezimibalabala kunye neentsiba ezininzi.
Iintsomi zaseCanarian ziphefumlelwe sisigwili saseGuanche, kodwa zikwathetha ngeziqithi ezibonakala nezinyamalale ngokungathi ngomlingo.
Isinxibo sendabuko saseRussia
USarafan, poneva, kaftan, ngamagama ezinye izinxibo zesintu zaseRashiya, amagugu ezityebi zenkcubeko yabantu bamandulo baseYurophu
Iintsomi zaseMexico, eziphendula ngokudibanisa iinkcubeko zangaphambi kweColumbian kunye neYurophu, zenza ifa lobutyebi belifa
Isinxibo sendabuko saseJapan
IJapan likhaya lam lesibini. Sele ndikhona amaxesha amaninzi kwaye andinakulinda ukuba ubhubhane aphele ukubuya. Ndiyalithanda eli lizwe, abantu balo, i-gastronomy kunye ne-Kimonos, i-obis, yukatas, iimbadada ze-geta? Wazi ntoni malunga neempahla zesiko laseJapan?
Ilivo lePrague Astronomical Clock
I-Prague Astronomical Clock sisiqwenga esikhethekileyo emhlabeni, siza kukuxelela intsomi ejikeleze lo msebenzi wobugcisa ungakholekiyo.
Izithethe ezili-10 ezingaqhelekanga emhlabeni
Eyona nto intle ngokuhambahamba kukwazi inkcubeko kunye nezithethe ezintsha.Fumanisa kule post izithethe ezili-10 ezingaqhelekanga emhlabeni!
Yukatán isinxibo esiqhelekileyo
Isinxibo esiqhelekileyo saseYukatán sisiphumo sokungaziphathi kakuhle phakathi kwabemi be-Hispanics. Yenziwa ngexesha lejarana, umdaniso wesiko lommandla
Amasiko kunye neMveli yaseMelika
Amasiko kunye nezithethe zaseMelika zibandakanya iiholide ezinje ngombulelo okanye uSuku lwePatrick.
Iimuvi zokubukela ngaphambi kokuya eParis
Phakathi kweefilimu ekufuneka uzibone ngaphambi kokuya eParis 'nguMarie Antoinette', 'Les Miserables' okanye 'IHunchback yeNotre Damme'.
Iintsomi zeGalicia zininzi njengoko zintle kwaye ziphendula kwilifa lomlomo nelityebileyo lomhlaba waseBreogán
Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz
Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz kudibanisa eyona nto ingumdiliya kunye neemveliso ezivela eSpain kunye nefuthe laseAfrika.
Isinxibo esiqhelekileyo saseJalisco
Isinxibo esiqhelekileyo saseJalisco sinxulunyaniswa nesiko lecharrería kunye nemariachi. Ke ngoko, imele abona bantu baseMexico.
Amabali aseRoma maninzi kangangokuba ade abhekisele ekusekweni kwesixeko nakwiminyaka yayo yokuqala yobukho.
Imidaniso eqhelekileyo yommandla weCaribbean
Imidaniso eqhelekileyo yommandla weCaribbean ine-substrate ephindwe kathathu: eyomthonyama, enye evela eSpain kunye neAfrika.
Izitya ezi-7 eziqhelekileyo zaseMexico ekufuneka uzizamile
Ukutya kwaseMexico lilifa lemveli loLuntu. Sikubonisa i-7 izitya eziqhelekileyo zaseMexico ekufuneka uzizamile.
Iimuvi ezi-9 zokubukela ngaphambi kokuya eRoma
Iimuvi ezilungileyo ukuzibona ngaphambi kokuya eRoma zikunika umbono oya kuba luncedo kuhambo lwakho oluya kwisiXeko esingunaPhakade.
Iintsomi zaseSeville zininzi kakhulu kwaye zibhekisa kwixesha elidlulileyo labalinganiswa ababehlala kwisixeko esihle saseAndalusi.
Uvavanyo lweCovid olufunwa lilizwe lubonisa ukungabikho kokufana. Ngamnye kubo useke imigangatho yakhe kunye neemfuno.
Ukufunda ngeendawo ezikude kwiplanethi yindlela elungileyo yokubulala i-bug, ungaphoswa zindululo zethu!
Isinxibo esiqhelekileyo saseVeracruz sidibanisa i-autochthonous kunye nento evela eSpain. Eyona nto iphambili kumhlophe kunye neempahla zayo ezilula.
Siza kukuxelela ukuba zeziphi iilwandle ezingcono ze-nudist kwisiqithi saseTenerife kunye nezinto ezikunika zona ubume bazo.
Uhambo ngolwandle lweMeditera
Sithetha ngomtsalane omangalisayo wohambo lweMeditera, olusinika iindlela ezahlukeneyo zokuhamba.
Injani irhafu ePortugal
Sikuxelela ezinye iinkcukacha ukuba ufunde indlela yokuhlawula irhafu ePortugal, inkcukacha ebalulekileyo ukuba siya kwilizwe lasePortugal.
Siyakuxelela ukuba luyintoni na ukhenketho kwezemidlalo, luhlobo lokhenketho olwandayo nolunokwenziwa kwiindawo ezininzi.
Amasiko ase China
Siza kuthetha ngezinye zeenkcubeko ezinomdla zaseChina, ilizwe elinenkcubeko yakudala enokunikezela okuninzi.
Unxiba njani eMorocco
Sikuxelela indlela onokuthi unxibe ngayo kutyelelo oluqhelekileyo eMorocco, usazi ngakumbi malunga neempahla zabo eziqhelekileyo.
Sikuxelela zonke iinkcukacha malunga nezinto eziqhelekileyo nezesinxibo eIndiya ukuze ufunde okungakumbi ngenkcubeko.
Iindidi zokhenketho eSpain
Sikuxelela ukuba zeziphi iintlobo zokhenketho eSpain ukuze wazi ukuba yeyiphi na eyakho.
Umthendeleko wePatios yaseCórdoba
Umnyhadala weCordoba patios lukhuphiswano oluhle lweentyatyambo apho ezi zithuba zezindlu zihonjiswe kakuhle.
Siza kuthetha ngezona zithethe zibalaseleyo eIreland ukuze sazi le ndawo ingummangaliso ngakumbi.
Sithetha ngeendawo eziphambili zabakhenkethi eMzantsi Melika, kunye neendawo eziphambili zokundwendwela.
Iilwandle ezintle kwiAzores
Sithetha ngezinye zezona zilwandle zibalaseleyo kwiziqithi zeAzores, ezigqame ngobuhle bazo obukhulu.
Ezona ziqithi zihle eGrisi
Siza kuthetha ngezona ziqithi zihle eGrisi, iindawo ezinomdla kakhulu kubakhenkethi abanomtsalane omninzi.
Iindawo ezi-5 eziphambili zeenkampu eCatalonia
Sithetha ngeenkampu ezintlanu ezilungileyo eCatalonia, indawo yokuhlala entle yeholide yakho elandelayo.
Ulwandle lwaseOyambre eCantabria
Sikuxelela into enokubonwa kunxweme oluhle lwaseOyambre eCantabria nakwiindawo ezikufuphi.
Yintoni ongayibona kwindawo yaseCimadevilla
Sikuxelela into enokubonwa kwindawo edumileyo yaseCimadevilla eGijon, eyona ndawo yakudala.
ICala Llombards eMallorca
Sikunika iingcebiso malunga nento onokuyibona eCala Llombard, kwisiqithi saseMallorca, kunye neendawo ezikufutshane.
IArgoitia, indawo 'yamagama asibhozo amaBasque', ayikho. Ukuyila, iinxalenye zeedolophu ezinje ngeZarautz, iZumaya okanye iGuetaria zithathiwe.
Sithetha ngeFaedo de Ciñera, ihlathi elihle le-beech eliseLeón elinemihlaba emihle.
ISan Miguel de Escalada
ISan Miguel de Escalada yenye yezinto ezimangalisayo zaseSpanish zangaphambi kweRoma. Ungayindwendwela kumasipala weGradefes, kwiphondo laseLeón.
Sikuxelela into enokubonwa kwimifula yaseLeon, indawo entle kakhulu eCastilla y León.
Ipaki yendalo yeLiencres
Sikuxelela into enokubonwa kwaye yenziwe eDunas de Liencres Natural Park kuluntu lwaseCantabria.
Owona mlambo mde emhlabeni
Bekusoloko kukholelwa ukuba uMlambo umNayile odume ngowona mde emhlabeni, kodwa ukuba bekungekho ...
IParador de León
IParador de León okanye iConvent yeSan Marcos sisihombo sokwakha apho uya kuziva uhanjiswa kumaxesha adlulileyo.
Sikuxelela into enokubonwa kwindawo yaseSahara Desert, indawo eneendawo ezintle kunye nenkcubeko enomdla.
Iilwandle ezintle zaseHuelva
Siza kuthetha malunga nokuba zeziphi ezona zilwandle zintle kakhulu eHuelva, iindawo ezinesanti ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kubakhenkethi.
Ithempeli laseLuxor eYiputa
Sikuxelela zonke iinkcukacha malunga neTempile yaseLuxor eyaziwayo eJiphutha, itempile eyayiyeyeThebes yamandulo.
Yintoni ongayibona eSarlúcar de Barrameda
Ukuba ufuna ukwazi ukuba uza kubona ntoni eSanlucar de Barrameda, ngenisa lo myalezo ukufumana zonke iimfihlelo ezifihliweyo leli litye laseCádiz.
Sikuxelela yonke into enokubonwa kwiChâteau de Chambord ebekwe kwiLoire Valley eFrance.
Uninzi lweedolophu ezintle eFrance
Sikubonisa ukuba zeziphi ezona zixeko zihle eFrance kuluhlu lweendawo ekufuneka sizindwendwele.
Sikuxelela yonke into onokuyibona uyenze kwindawo yaseChamps Elysees eParis.
Ababaninzi abahambi abanobuganga bokuya eChad. Iimbambano kunye nohlaselo lobunqolobi lubangele ukhenketho hayi ...
Ubuhle kunye nothando lweCádiz zidityaniswe endaweni enye: iMedina Sidonia, indawo ekuyiwa kuyo phakathi ...
Yintoni ongayibona kwisithili saseMontmartre eParis
Sikuxelela ukuba ngawaphi amanqaku aphambili anomdla kwisithili saseBohemian Montmartre eParis.
Plovdiv, yintoni ongayibona kwesi sixeko saseBulgaria
Sikuxelela ukuba zeziphi iindawo ezinomdla kwisixeko sasePlovdiv, indawo yesibini ebaluleke kakhulu eBulgaria.
Yintoni enokuyenza eCuzco (ePeru): isikhokelo esisebenzayo kutyelelo lwakho esixekweni
Ukuze ungaphoswa naziphi na iinkcukacha zommandla, ndiza kukunika kule ndawo uluhlu lweyona ndawo inomdla ukutyelela eCuzco.
Yintoni ongayibona eOurense
Sikuxelela ukuba ngawaphi amanqaku aphambili anomdla kwisixeko sase-Ourense saseGalician.
ILausanne, ibalulekile kwisixeko saseSwitzerland
Sithetha ngeendawo ezibalulekileyo zokutyelela kwisixeko saseSwitzerland iLausanne.
Siphila kwihlabathi elahlukileyo kwaye kukwahluka okusenza sibe nomdla njengohlobo. Namhlanje siza kubona ...
Xa kuthelekiswa namanzi ashushu noxineneyo oLwandle lweMeditera, uLwandle lweBaltic lunokubonakala ngathi luyabanda, ukude kwaye ...
Yintoni ongayibona eBaiona, eGalicia
Sikubonisa into enokubonwa kwidolophu yaseBaiona, indawo entle ebekwe kwiRías Baixas eGalicia.
Yintoni ongayibona eSanto Domingo
Sikuxelela into enokubonwa eSanto Domingo, kunye neendawo zayo zendalo kunye nendawo ebalulekileyo yobukoloniyali.
Isangqa seArctic yeyona ndawo inkulu enyulu emhlabeni. Indawo emangazayo yobusika engapheliyo nangona ...
I-Bari sisixeko esihle kumazantsi e-Itali esikunikezela ngelifa elihle kakhulu, imozulu elungileyo kunye nesona sihle kakhulu.
Sikuxelela into enokubonwa kwisixeko sasePoland saseKatowice kwiphondo laseSilesia.
Sikuxelela into onokuyibona kwiiShetland Islands ezintle kumantla eScotland, iparadesi yokwenene.
Uyiseta njani indawo osebenza kuyo ezilalini
Ukusebenza emaphandleni yindlela entsha yokubuyisa ubomi kwiilali ezilahliweyo. Ndiza kukuxelela ukuba yintoni kwaye uyicwangcisa njani indlela osebenza ngayo ezilalini.
Indawo oya kuyo: I-United Arab Emirates
Kangangexesha elithile ngoku, kuMbindi Mpuma, kuye kwavela amandla obutyebi babo buvela kwigolide yethu ...
Ngaphambili iGeorgetown yahlulwa kumbindi weWashington kwaye kangangeminyaka emininzi yayihlala oonozakuzaku kunye ...
Ukutya phi eMadrid? Zili-9 iindawo zokutyela ezicetyiswayo esixekweni
IMadrid inesibonelelo esibanzi sokutya. Kukutya phi eMadrid? Kule posi ndibelana nawe nge-9 zokutyela ezicetyiswayo esixekweni.
Siza kufumanisa into esinokuyibona inomdla kwisixeko sase-Italiya iTrieste, kunye nommandla waso wembali.
Iihotele ezi-6 eziphambili eCopenhagen
Iihotele ezi-6 eziphambili eCopenhagen ngo-2022.
UFuciño wenza iPorco eGalicia
Sikuxelela ngakumbi ngendawo entle ebizwa ngokuba yiFuciño do Porco ekwiLugo mariña eGalicia.
Ulwandle lweSargasso, ulwandle ngaphandle konxweme
Ewe kunjalo, uLwandle lweSargasso kuphela kolwandle olungenalo unxweme, amanzi alo akahlambi ...
Ifumaneka kwisithili seCarabanchel liziko elikhulu lokuthenga eMadrid: Islazul. Ivenkile yeparadesi ...
Sikuxelela into onokuyibona kwaye uyenze kwisixeko saseIndiya iBenares, esithathwa njengesixeko esingcwele.
Sikuxelela ngembali yeNqaba yaseWewelsburg eJamani, indawo eyimbali.
Sikuxelela iinkcukacha omele uzazi ngeCathhedral yaseGirona, umsebenzi odibanisa izitayile kwaye ubalise ibali elihle.
Plaza Usodolophu weSalamanca
Siza kuthetha ngePaza kaSodolophu waseSalamanca, umfuziselo wesixeko kunye nobuhle obuhle kakhulu bokwakha.
Amazwe amakhulu kwihlabathi
Okwangoku kukho amazwe ali-194 kwihlabathi elamkelweyo yi-UN ngurhulumente wabo kunye nokuzimela okupheleleyo, ...
I-Arguineguín ikunika iilwandle ezintle, iipaki zendalo, imozulu entle unyaka wonke kunye ne-Canarian gastronomy.
Ilali yaseSanta Claus
Sithetha ngepaki yomxholo weSanta Claus Village, eFinland, apho ahlala khona uSanta Claus.
Yintoni ongayibona kwi-Eguisheim, Alsace
Sikuxelela yonke into enokubonwa kwidolophu yase-Eguisheim, ebekwe kwindawo yeAlsace eFrance.
Ngaphezulu kweminyaka engama-5.000 XNUMX yembali, idolophu yaseSevillian yaseCarmona yenye yezona ndawo zibalaseleyo ...
Ifumaneka kwiikhilomitha ezingama-56 ukusuka eCastellón, i-Columbretes archipelago yenye yezolondolozo loLwandle lweMeditera ...
I-Széchenyi Spa eBudapest
Sithetha nge-Széchenyi Spa emangalisayo kwisixeko saseBudapest, enye yezona zikhulu emhlabeni.
Sikubonisa ezinye zeedolophu zaseCádiz ongafanele ukuba uziphose, zizele zizindlu zabamhlophe, ilifa lemveli kunye neendawo zendalo.
Izimangaliso ezisixhenxe zehlabathi
Ukusukela ngo-2007 kukho izinto ezisixhenxe ezimangalisayo zeLizwe langoku ezikhethwe kuvavanyo lwehlabathi ngaphezulu kwama-7 ...
Yintoni ongayibona eHuelva
Iphondo laseHuelva yindawo apho singonwabela ukuzonwabisa kunye neendawo ezininzi zokuzibona. Yaziwa ngokuba ...
Yintoni ongayibona e-Ibiza
I-Ibiza sisiqithi esikwiiBalearic Islands kwaye ngokungathandabuzekiyo sesona sidumileyo. Amagqabantshintshi ...
Ukuwa lelinye lawona maxesha mahle okuhamba. Amaqondo obushushu aphakathi, amaxabiso aphantsi ...
I-Urbión Lagoon emnyama
Ukutyelela eyona ndawo intle yendalo ikwayingcinga efanelekileyo yokubaleka. Kule meko sithetha ...
Siza kuthetha ngezona zitya zimnandi zeBasque gastronomy, egxile kwintlanzi nakwizithako ezisemgangathweni.
Iminqweno yase China
I-China namhlanje lelinye lawona mazwe anomdla kakhulu kwihlabathi. Ayikuko ukuba kwakungekho ngaphambili, kodwa ngexesha ...
Uhamba nini ukuya eThailand
I-Thailand yenye yeendawo ezikhethwayo kubahambi xa ucwangcisa iholide esempuma mpuma Asia. Kuqwalaselwa njenge ...
Yintoni ongayibona kwiziqithi zeBalearic
Sikuxelela yonke into enokubonwa kwii-Balearic Islands, indawo yabakhenkethi kakhulu enamabhishi amahle.
IRomania, iindawo ezibalulekileyo
Sikuxelela zonke iindawo ezinomdla ezinokubonwa eRomania, ezinezixeko ezahlukeneyo kunye nezikhumbuzo.
Kufuneka wenze ntoni eStockholm
IStockholm sesinye sezixeko ezithandekayo nezimangalisayo eYurophu. Ngendawo enelungelo kwilitye leziqithi ezakhiweyo ...
Yintoni ongayibona eMarseille ngosuku olunye
Sikuxelela yonke into enokubakho kwaye ekufuneka ibonwe kwisixeko saseMarseille ngosuku olunye, kutyelelo olufutshane.
Yintoni ongayibona eBern
Sikuxelela yonke into onokuyibona kwaye uyenze kwisixeko esihle saseBern eSwitzerland, kunye nedolophu yakudala enomdla.
Iilwandle ezilungileyo eSpain
Sikuxelela ukuba zeziphi iilwandle ezintle eSpain, ezinye iilwandle ezinesanti ukuze uzindwendwele.
Yintoni ongayibona eNew Mexico
Sikuxelela yonke into enokubonwa kunye nokutyelelwa eNew Mexico eMelika yaseMelika.
Omnye wemifuziselo yeCosta Blanca kukunyanzelwa kukaPeñón de Ifach, ilitye elikhulu ...
I-Poo beach, e-Asturias, ikwindawo ekhuselweyo yoNxweme lweMpuma, ikhilomitha enqabileyo ...
Yintoni ongayibona eGengenbach, eJamani
Sikuxelela into enokubonwa kwisixeko saseGengenbah eJamani, igugu eliyinyani eliphakathi.
Sithetha ngezinye zeedolophu ezigqwesileyo eToledo ukutyelela ngeempelaveki.
Unxantathu omangalisayo waseBermuda
Ukuba kukho imfihlakalo yokuba ilizwe le-cinema kunye nomabonakude londle ngemihlakulo nakwiminyaka, oko ...
Yintoni ongayibona eGhent
Sikuxelela yonke into enokubonwa neyenziwayo kwisixeko saseGhent eBelgium, isixeko esigcwele imbali.
Yintoni ongayibona eBilbao
Sikuxelela yonke into enokubonwa neyenziwayo kwisixeko saseBilbao, kumantla eSpain.
Ezona zilwandle zilungileyo kwi-snorkeling
Ukuba uyaluthanda ulwandle, ngokuqinisekileyo uya kuvuma ukuba zimbalwa iimvakalelo ezilinganayo nezokwenza ...
Yintoni ongayibona eLeón
Sikuxelela yonke into enokubonwa kwisixeko esinembali saseLeón kwindawo yaseCastilla y León.
I-Combarro, idolophu ebukekayo eGalicia
Sikuxelela into enokubonwa kwidolophu yaseCombarro, ebekwe kwindawo yaseGalician Rías Baixas.
Iphondo laseMalaga laziwa kakhulu ngeCosta del Sol, ngeelwandle kunye neendawo zazo. Kodwa ngaphezulu…
IPuerto de Santa María, eCádiz
Sikuxelela yonke into enokubonwa e-El Puerto de Santa María kwiphondo laseCádiz.
Yintoni ongayibona eCascais, ePortugal
Fumanisa oko kunokubonwa kwisixeko sasePortugal iCascais, kwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka eLisbon.
Sikuxelela yonke into enokubonwa eLatvia, ilizwe elinonxweme, indawo zendalo kunye nezixeko ezintle.
Yintoni ongayibona eBergamo
Sikuxelela yonke into enokubonwa kwisixeko sase-Italiya saseBergamo, kwingingqi yeLombardia.
Sikubonisa ii-coves ezilungileyo eMallorca, iiparadesi ezincinci ukonwabela iiholide zakho.
Yintoni ongayibona eFlorida
Elinye lamazwe enza iUnited States yiFlorida. Yimeko apho abantu abaninzi behlala khona kunye nejografi yayo ...
Ifunyanwa kwiphondo laseBrugos, kwithafa lomlambo iArlanza, yenye yezona ndawo zibalulekileyo ...
Ukhenketho lwasemaphandleni eSpain
Sikunika iingcinga ezininzi zeendawo apho kunokwenzeka ukonwabela ukhenketho lwasemaphandleni eSpain.
Sikuxelela into enokubonwa kwidolophu yaseGalician yaseBetanzos, kwiphondo laseA Coruña.
Yintoni onokundwendwela eCagliari
Sikuxelela yonke into enokubonwa kunye nokutyelelwa kwisixeko sase-Italiya iCagliari.
ITallinn, ikomkhulu lase-Estonia
Yintoni ongayibona kwisixeko saseTallinn, idolophu elikomkhulu lase-Estonia, kunye nedolophu entle yakudala, iNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi.
La Palma, kwiziqithi zeCanary
Fumana ukuba ubone ntoni kwaye wenze ntoni eLa Palma kwiiCanary Islands.
Yintoni ongayibona eAvilés, Asturias
Sikuxelela yonke into enokubonwa kwisixeko saseAstriya saseAvilés, isixeko esineedolophu entle endala kunye nesisu esikhulu.
Elona xesha lilungileyo lokuya eJapan
Kubantu abaninzi, ukuya eJapan liphupha lobomi kuba eli lizwe liMpuma ...
Kufuneka wenze ntoni eFuerteventura
Sikuxelela yonke into enokwenziwa kwaye ibonwe kwisiqithi saseFuerteventura kwiiCanary Islands ezaziwayo.
Yintoni ongayibona eMarseille
Sikuxelela ngeendawo ezinomdla kwisixeko saseFrance iMarseille, isixeko esihle esisezibukweni esikumazantsi eli lizwe.
Yintoni ongayibona eSwitzerland
Sikuxelela ukuba zeziphi ezona ndawo ziphambili zomdla eSwitzerland, ilizwe elinemihlaba entle yendalo kunye nezixeko ezinamaziko embali.
Yintoni ongayibona eCroatia
Sikuxelela ukuba zeziphi ezona ndawo ziphambili zomdla eCroatia, indawo ebonelela ngendalo kunye nezixeko zakudala.
Colmar, ndwendwela i-jewel yaseAlsace
Sikubonisa yonke into ekufuneka uyibonile kwisixeko saseFrance saseColmar, isixeko esineedolophu entle endala eAlsace.
Amasiko eCulinary aseFrance
Ukuba kukho intetho ethi, apho uya khona wenze oko ukubonayo, singatsho na ukuba uyaphi na apho utya khona ...
I-Gastronomy yase-Austria: izitya eziqhelekileyo
Siza kukubonisa ukuba zeziphi izitya ze-Austrian gastronomy, izitya ekufuneka uzizamile.
Ukubaleka emaphandleni e-Asturias
Fumana ezinye zeedolophu ezilungileyo kwiAsturias ukonwabela ukuphuma emaphandleni.
Yintoni yokutyelela eSardinia
Sikubonisa ukuba zeziphi ezona ndawo ziphambili zomdla kwisiqithi saseSardinia e-Itali, esinonxweme oluhle kunye nezixeko ezinomdla.
Iingcebiso zokuhamba emva kweCovid-19
Ubhubhane obangelwe yiCovid-19 ulichaphazele ngokukodwa icandelo lezokhenketho. Ukuvalwa kwemida, ukurhoxiswa kwe ...
Ukutya phi eHuesca
Iindawo ezilungileyo zokutya eHuesca yindawo yaseSan Lorenzo kunye neCoso Alto, eyenza into eyaziwa ngokuba yi-El Tubo.
Yintoni ongayibona eSlovenia
Sikuxelela yonke into enokubonwa eSlovenia, igcwele izixeko zembali kunye neendawo ezininzi zendalo zobuhle obukhulu.
Sikuxelela ukuba zeziphi ezona zilwandle zibalaseleyo eHuelva kwaye zeziphi iimpawu abanazo ukuze wenze uluhlu ukuba le yindawo yakho oya kuyo.
Yintoni ongayibona eSella river
Sikuxelela yonke into enokubonwa kufutshane ne-Sella River e-Asturias, enye yeyona milambo ibalulekileyo.
Ezona dolophu zinomdla eSeville
Sikubonisa ezinye zeedolophu eziphambili eSeville zokundwendwela, kunye needolophu ezibonelela ngelifa kunye neendawo zendalo.
Isiqithi seMyuziyam eBerlin
Sikuxelela into enokubonwa kwisiQithi seMyuziyam esidumileyo embindini weBerlin, isiqithi esineemyuziyam ezibalulekileyo.
Izinto zokwenza eRothenburg
Sikuxelela yonke into enokubonwa kwisixeko saseJamani iRothenburg, idolophu enedolophu entle yakudala.
Iipaki zamanzi eCatalonia
Sikuxelela ukuba zeziphi iipaki zamanzi ezintle eCatalonia, izakhiwo ezinkulu ezinomtsalane kunye neendawo zokuzonwabisa.
ILos Caños de Meca eCádiz
Fumanisa oko kunokubonwa kwidolophu yaseLos Caños de Meca ekwiphondo laseCádiz, elunxwemeni.
UPonta Delgada kwiiAzores
Fumanisa oko kunokubonwa kumasipala wasePonta Delgada, kwiiAzores, ngobugcisa besitrato, izakhiwo ezintle kunye neendawo zomhlaba.
Sikuxelela yonke into omele uyazi ngokutyelela i-Cathedral yaseMurcia, esona sakhiwo senkolo sibaluleke kakhulu.
UPiazza Navona eRoma
Sikuxelela yonke into enokubonwa ePiazza Navona, esinye sezikwere eziphambili zedolophu yaseRoma.
Sikuxelela into enokubonwa kwidolophu yaseFátima ePortugal, indawo apho unokufumana khona iindawo zonqulo kunye neendawo zendalo.
Yintoni ongayibona eSan Sebastián
Sikuxelela yonke into enokubonwa kwisixeko esihle saseSan Sebastián, indawo ene-gastronomy elungileyo kunye neendawo ezintle zomhlaba.
Yintoni ongayibona eMasca, eTenerife
Sikuxelela into enokubonwa kwidolophu encinci yaseMasca eTenerife, indawo enendlela entle yokunyuka intaba.
Roque Nublo eGran Canaria
Sikuxelela into enokubonwa xa undwendwela iRoque Nublo, indawo eyakhiwe ematyeni embindini wesiqithi saseGran Canaria.
Namhlanje ihlabathi lanamhlanje likhethe imimangaliso yalo, kodwa ngokwembali iMimangaliso yeLizwe laMandulo ...
Ifumaneka kwindlu entle nasembindini wenkulungwane ye-XNUMX kwisitalato iVentura Rodríguez, iMyuziyam yaseCerralbo yenye ...
Fumana into onokuyibona eAqaba, eJordani
Sikuxelela yonke into enokubonwa neyenziwayo kwisixeko saseAqaba eJordani, ekuphela kwaso esinokufikelela elwandle.
I-gastronomy yaseJapan yenye yezinto endizithandayo. Zimbalwa kakhulu izinto andizithandi kwaye ndiyabakhuthaza bonke ...
Ukutya kwemveli okuvela eSpain
Ukutya kwendabuko kwaseSpain kubanzi, kwahlukile kwaye kumnandi kakhulu. Eyona nto ibalulekileyo yenziwe yimirhumo eyahlukeneyo ...
Yintoni ongayibona ePuerto de la Cruz, eTenerife
Sikubonisa yonke into enokubonwa kwisixeko sasePuerto de la Cruz kwisiqithi saseTenerife.
Ndwendwela iAlhambra eGranada
Sikunika iingcebiso ezilula zokundwendwela iAlhambra kwisixeko saseGranada, esinobunzima obukhulu.
Yintoni ongayibona kwiMycenae
Sikuxelela yonke into esinokuyibona kwindawo yezinto zakudala zaseMycenae eGrisi, kunye nomyuziyam wezinto zakudala.
Sikuxelela ukuba ungatya phi eLisbon kwaye zeziphi ezona zitya zibalaseleyo zePortugal gastronomy ekufuneka uzame.
Yintoni ongayibona kwiConil de la Frontera
Siza kukubonisa yonke into enokubonwa neyenziwayo kwidolophu yaseAndalusi yaseConil de la Frontera ekwiphondo laseCádiz.
Eyona nto ibalaseleyo ePortugal
Siza kukubonisa eyona ilungileyo iPortugal, ilizwe eligcwele iikona ezinomdla.
Amazwe anabantu abaninzi emhlabeni
Ngala maxesha obhubhane sikhumbula inani elikhulu labantu abahlala kwiplanethi yethu. Kwakungasoloko kunje, ...
Iingqukuva zaseYurophu ekufuneka uzindwendwele
Sikuxelela ukuba zeziphi ezona ngqukuva zibalaseleyo eYurophu, ezinye iindawo ekufuneka sizindwendwele.
Yintoni ongayibona kunxweme lwase-Italiya
Sithetha ngamanye amanqaku anomdla anokubonwa kunxweme lwase-Italiya, indawo enkulu kakhulu enemihlaba emangalisayo.
Iilwandle zeParadesi zehlabathi
Siza kwazi iilwandle zeparadisi zomhlaba, kunye neelwandle ezintle kakhulu onokuzityelela kwiplanethi yethu.
Iindwendwe zeRoyal Barefoot
Imizuzu embalwa ukusuka ePuerta del Sol yi-Monastery yaseRoyal Barefoot, isakhiwo esingaphandle ...
Yintoni ongayibona eCalpe, Alicante
Sikuxelela into enokubonwa kwidolophu yaseCalpe, eAlicante, indawo enabakhenkethi kakhulu enezinto zokuhlala ezembiweyo.
Sikuxelela yonke into enokubonwa kunye nendlela yokufika kwi-arozaro Waterfall eyaziwayo yoMlambo iXallas eGalicia.
Uphi iNew Zealand
INew Zealand, enye yeendawo ezinomhlaba omangalisayo kunye nolondolozo olulungileyo kwiplanethi. Ayenzeki ukuba ...
Yintoni ongayibona eArchena, eMurcia
Sikuxelela yonke into oyibonayo noyenzayo kwisixeko saseArchena eMurcia, apho kukho iindlela zokuhamba intaba kunye neemyuziyam.
Yintoni ongayibona eBurano
Sikuxelela yonke into onokuyibona uyenze nakwisiqithi esincinci saseBurano, kufutshane nesixeko saseVenice e-Itali.
Izinto zokwenza e Hallstatt
Sikuxelela yonke into onokuyibona uyenze kwidolophu encinci yaseHallstatt ebekwe echibini laseAustria.
Imyuziyam yasePrado yenye yezona ndawo zibalulekileyo zobugcisa kwihlabathi kwaye idume kakhulu eMadrid. Ibiyi…
Yintoni ongayibona eToledo
Sikuxelela into enokubonwa kwisixeko saseToledo, isixeko esidala apho unokubona zonke iintlobo zelifa kunye nezakhiwo ezifana neAlcazar.
UTorres del Paine
Sikuxelela into enokubonwa kwiPaka yeNdalo entle iTorres del Paine ebekwe eChile, enamachibi omkhenkce, iintaba kunye nomkhenkce.
ICaldes de Montbui
Kufuphi kakhulu neBarcelona, ​​idolophu yaseCaldes de Montbui yaziwa ngamanzi ayo ashushu. Kodwa ikwabonelela ngezikhumbuzo kunye ne-gastronomy etyebileyo.
UPlaya Blanca Lanzarote
Sikuxelela into enokubonwa kwidolophu yasePlaya Blanca eLanzarote, indawo enabakhenkethi ngokwenene kufutshane neendawo ezinomdla.
Umgxobhozo weSan Juan
Idama laseSan Juan laziwa ngabantu abaninzi njengonxweme lwaseMadrid. Kule ndawo ibekwe i-52 ...
USodolophu waseBárcena yidolophana esemaphandleni eCantabria ebonakala ngathi iqinisiwe ngexesha. Ukubonelela ngeendlela zeentaba, ukuzola kunye ne-gastronomy ecebileyo.
Iilwandle zaseCabo de Gata
Sithetha ngeelwandle ezintle kwindawo yaseCabo de Gata ebekwe eAlmería, eneendawo ezintle zesanti ukonwabela ihlobo.
Iidolophu zaseGranada, phakathi kolwandle kunye neentaba
Iidolophu zaseGranada azaziwa kangako kunenkunzi yephondo. Kodwa, ukuba ubandwendwela, uyazi iindawo ezintle.
Sikuxelela into onokuyibona uyenze kwiLake Sanabria, undwendwelo olukhulu ukonwabela elona chibi likhulu kwi-Peninsula.
Yintoni ongayibona eWroclaw
Sikubonisa yonke into onokuyibona xa undwendwele isixeko saseWroclaw ePoland, nezakhiwo zaso ezindala, izikwere kunye necawa enkulu.
Iindawo zeBrihuega zeLavender
Ixesha elide, amasimi e-lavender eProvence ibiyindawo ebaluleke kakhulu kubakhenkethi kubathandi ...
I-Aragonese Pyrenees, imimangaliso yendalo kunye nembali eninzi
IPyrenees yaseAragonese yenye yezona ndawo zintle eSpain. Inikezela ngemimangaliso yendalo, iidolophu ezintle kunye nokutya okumnandi.
Yintoni ongayibona eMérida
Sikuxelela yonke into enokubonwa kwisixeko saseMerida, esinezinto ezininzi zakudala ezivela kwixesha loBukhosi baseRoma.